China Inodziya masokisi SS06R fekitori uye vagadziri | Eigday
Bhatiri Inodziya Midhudhudhu Giravhosi NaEC S28B
Bhatiri Inodziya Gloves S67B
Kushata masokisi SS06R
Kushata masokisi SS02B
Kushata masokisi SS01G
Rechargeable Battery Inopisa Glove Liner Mutete Heated ...
CE Yakashongedzwa Inopisa Motorcycle Gloves Ine Knucle ...
Basa Rinokosha: Muponesi Hakadya masokisi anoita kuti ako anotonhora-ekunze ekunze zviitiko zviwedzere kutakurika uye kunakidze. Kunyangwe iri kushanda, kusvetuka, kusvetwa muchando, kutsvedza nechando, kufamba-famba muchando, kuvhima, hove yechando, sledding, mudhudhudhu, kuchovha, kufoshora, uye chero munhu ane tsoka dzinotonhora.
Chinyorwa: 55% Coolmax + 25% Elastic + 20% Spandex
Ruvara: Dema + tsvuku
Kuchenesa pad: 7.4V 4W, inosanganiswa fiber kupisa zvinhu
Mutungamiriri: 3 nhanho tembiricha yekudzora, yakakwira / yepakati / yakaderera (99% -66% -33%), 35135DC yechirume yekubatanidza.
Nhanho yepamusoro (Tsvuku): -65 ℃ 3.5-4 maawa;
Pakati pepakati (Muchena): -55 ℃ 5.5-6 maawa;
Chikamu chakaderera (Bhuruu): -40 ℃ maawa 10-11;
Bhatiri: Yakakwira mhando 7.4V 2200mAh lithium polymer bhatiri pack, 35135 yechikadzi DC chinongedzo
Chaja: 8.4V 1.5A, mbiri-musoro charger, 35135 murume DC chinongedzo. US, Europe, UK & AU plugs pane sarudzo
Pasuru: Kazhinji chipo bhokisi / ruvara bhokisi (Bhokisi saizi: 14.84 x 5.31 x 2.72 inches)
● 1 peya Inodziya masokisi
● 2pcs Mabhatiri anodzosera
● 1pc Dhaja mbiri
● 1pc Chinyorwa chekushandisa
● 1pc Yakashongedzwa yechipo bhokisi
Yakasarudzika Chigadzirwa MOQ: 1000 mapaundi
Yakasarudzika Package: 1000pcs
Inopinza, inofema, inokurumidza-kuomesa, yakasununguka-simbi, shandisa yakasviba-yakatetepa yemagetsi yekudziya module.Soft Yakapeteredzwa yakasimbiswa chitsitsinho & chigunwe chakachinjika chakaringana uye chakadzora kupisa chinhu chinobatsira kutarisa kupisa pachigunwe kuchengetedza tsoka dzako kudziya kubva kunotonhora mamiriro ekunze.
Yakaunganidzwa fiber kupisa zvinhu, zvakanyanya kuchengetedzeka kune tsoka dzako.
3. Inodziya nzvimbo inovhara kunzvimbo yese yezvigunwe, instep, uye kumberi kwetsoka.
4. 7.4V rechargeable A-grade polymer lithium-ion battery pack, yakachengeteka uye inotakurika, simba rakasimba, uye bhatiri rine CE / ROHS / FCC / UL zvitupa;
5.Three-nhanho tembiricha yekudzora switch inogona kugadzirisa akasiyana kupisa tembiricha zvinoenderana akasiyana nharaunda. LED tsvuku ndeye yakanyanya tembiricha, chena yepakati tembiricha, bhuruu kune yakaderera tembiricha.
Kushanda: Imba yekumba, uye zviitiko zvekunze: kudzika musasa, kuvhima, hove yechando, kuchovha bhasikoro, kuchovha bhasikoro, mudhudhudhu, kumhanya, kusvetuka, kusvetwa kwechando uye chero mimwe mitambo yekunze.
Yakakwira Hunhu Mushure Mekutengesa Sevhisi.
12-mwedzi kutsiva kune chero nyaya dzakanangana nemhando.
Zvese zvedu zvigadzirwa zvinodziya zvine zvakakwana mushure mekutengesa sevhisi rutsigiro. Kana uine chero mibvunzo nezvehunhu, saizi, bhatiri kana chaja, ndapota e-mail isu, isu takagadzirira pachedu kukubatsira.
Pashure: Kushata masokisi SS02B
Zvadaro: 5V jira rebhuruu